Hashtag Ngwaọrụ nyocha na njikwa - Ndepụta zuru ezu #Hashtag
Hashtag bụ okwu nke afọ N'otu oge, e nwere a nwa aha ya Hashtag, na iwu a machibidoro iwu na France (mot-dièse).
Hashtags na-aga n'ihu ịnweta nnukwu uru mgbe ejiri ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị na mgbasa ozi mmekọrịta - ọkachasị ka ojiji ha agbasawanye karịa Twitter na Facebook. Ọ bụrụ na ịchọrọ isi ihe eshtag, lee Hashtag Ntuziaka na anyị bipụtara. I nwekwara ike ịgụ ọkwa anyị na ịchọta ihe kacha mma hashtags maka mmelite mmekọrịta ọ bụla.
Innye Chepụtara Hashtag?
- Chris Messina (@chrismessina) August 23, 2007
Dị ka isiokwu dị mkpa maka ịchọta ihe ọmụma n'ịntanetị, hashtags dịkwa mkpa. Anyị dere banyere ihe hashtag bu n'oge gara aga. Ndị mmadụ na ụlọ ọrụ na-eji hashtags achọta, mana ha na-ejikwa hashtag iji chọta ndị ọzọ na-eji teknụzụ ọchụchọ mmekọrịta.
Hashtag Platform Atụmatụ:
Hashtag nyocha, nyocha, nlekota oru na oru nlekota oru nwere otutu ihe:
Hashtag na -ewu ewu - ikike ijikwa na nyochaa ọnọdụ na hashtags.
Hashtag mata - ikike nke ekwuputara, na ihe obula, iji kwuru banyere hashtag.
Nnyocha Hashtag - ojiji ojiji nke hashtags na igodo ndị na-egbu egbu kwuru banyere ha.
Chọọ Hashtag - ịchọpụta hashtags na hashtags metụtara maka iji na nkwukọrịta mgbasa ozi gị.
Hashtag Mgbidi - Melite ezigbo oge, ngosipụta hashtag gwọọ maka mmemme ma ọ bụ ọgbakọ gị.
Offọdụ n'ime nyiwe ndị a nwere onwe ha ma nwekwaa ikike, ndị ọzọ ka ewulitere iji rụọ ọrụ iji mee ka mgbasa ozi mgbasa ozi gị na-elekọta mmadụ. Nakwa, ọ bụghị ngwaọrụ ọ bụla na-enyocha usoro mgbasa ozi ọhaneze na ezigbo oge… yabụ ị ga-eme nyocha tupu ị tinye ego na ngwa ọrụ dịka nke a iji hụ na ị nwetara ihe ịchọrọ!
Agorapulse - Na mgbakwunye na ngwa ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta, Agorapulse nwekwara hashtag nlekota na mkpesa.
All Hashtag - Hashtag niile bụ weebụsaịtị, nke ga - enyere gị aka ịmepụta ma nyochaa ngwa ngwa ngwa dị mfe dị mfe maka ọdịnaya na mgbasa ozi mmekọrịta gị. Nwere ike iwepụta ọtụtụ puku hashtags dị mkpa nke ị na-edepụta ma mado na mgbasa ozi mgbasa ozi gị.
Brand24 - Nweta ngwa ngwa banye na ntanetị kwuru, bulie afọ ojuju ndị ahịa na ire ahịa.
Nkọwapụta Hashtag Tracker - Ngwaọrụ Hashtag Ndepụta iji nyochaa arụmọrụ Hashtag.
BuzzSumo - BuzzSumo na-enyocha ndị asọmpi gị, akara aha na mmelite ụlọ ọrụ. Alerts hụ na ị jidere ihe ndị dị mkpa ma ghara ịmịchaa n'okpuru nnukwu mgbasa ozi mmekọrịta.
HashAtIt.com bụ nyocha ọchụchọ nke na-enyocha HASHTAGS (#) na ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi kachasị amasị gị dị ka Facebook, Twitter, Instagram, na Pinterest.
Hashtracking - Curate ọdịnaya, too obodo, mepụta mmeri mmeri mkpọsa & ịrịba ama dị ndụ na-elekọta mmadụ media ngosipụta.
Hashtagify.me bụ ngwa ọrụ n'efu iji chọpụta hashtags Twitter na mmekọrịta ha. Nyocha a dabere na 1% nlele nke tweets niile - kachasị nke Twitter na-enye n'efu.
Hashtags.org na-enye ozi dị mkpa, nyocha na otu esi enweta ihe ọmụma iji nyere ndị mmadụ aka, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ gburugburu ụwa melite mgbasa ozi mgbasa ozi ha na ọgụgụ isi ha.
Igodo - Sochie hashtags, isiokwu, na URL na ezigbo oge. Keyhole si hashtag nchịkọta dashboard zuru ezu, mara mma, ma nwee ike ịkekọrịta!
Nwale Keyhole Ọpụ:
RiteTag na-agbalite usoro ịchọta mkpado kachasị mma iji soro ọdịnaya a ga-ekerịta, na-anabata mkpado pụrụ iche nke ọtụtụ netwọkụ ịkesa ọdịnaya, gụnyere Twitter, Youtube, Instagram, Flickr… na ọtụtụ ndị ọzọ.
Tagdef - Chọpụta ihe hashtags pụtara, chọta hashtags metụtara ma tinye nkọwa nke gị na sekọnd.
TrackMyHashtag - ihe nyocha nke ihe nlekota oru nke ndi mmadu na-agbaso ihe nile n’eme na mgbasa ozi Twitter, nyochaa ihe ndi ahu, ma nye otutu nghota bara uru. TrackMyHashtag nwere ikike soro usoro mgbasa ozi mmekọrịta zuru oke iji nye gị nkeji oge nke isiokwu ahụ. Ọ na-anapụta ọtụtụ ozi bara uru enwere ike iji tụlee mmetụta nke mgbasa ozi mgbasa ozi ọ bụla, iji soro ọrụ niile nke usoro mgbasa ozi mmekọrịta, ma ọ bụ iji nweta usoro mgbasa ozi mgbasa ozi gị. TrackMyHashtag na-agbaso tweets na metadata metụtara isiokwu ọ bụla, hashtag, ma ọ bụ @mention, ma na ezigbo oge na akụkọ ihe mere eme maka oge ọ bụla.
UnionMetrics Union Metrics na-enye gị ike iji ọgụgụ isi na-elekọta mmadụ ị ga-erute ndị na-ege gị ntị wee wuo azụmahịa gị.
Gbaa akwụkwọ nchịkọta Twitter na ntanetị
Chọọ Twitter - ọtụtụ ndị mmadụ na-ele anya na nyocha Twitter iji chọta tweets kachasị na isiokwu, mana ị nwekwara ike iji ya chọta akaụntụ Twitter ịgbaso. Nwere ike pịa ndị mmadụ ma chọpụta ihe ndekọ kachasị maka hashtag ị na-eji. O nwekwara ike ịnye ihe ịchọrọ iji rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na achọpụta ndị asọmpi gị maka hashtag mana ị bụghị.
Ugboro abụọ bụ saịtị ebe ị nwere ike ịchọ n'ezie, debanye aha na ọbụlagodi otu hashtag a kapịrị ọnụ. Ha nwekwara ngwaọrụ dị ka mgbidi tweet nke ị nwere ike iji maka mmemme ma ọ bụ ọgbakọ ọzọ gị.
Trendsmap - You na-amalite na nlele mpaghara gị ebe ị nwere ike ịhụ isiokwu ndị na-ewu ewu. Nwere ike pịgharịa map ndị ahụ site na ịdọrọ ha na mpaghara ọzọ ma ọ bụ mbugharị ma ọ bụ pụta site na iji akara ngosi / mwepu. Mgbe ị hụrụ ihe na-adọrọ mmasị pịa na isiokwu ahụ maka ozi ndị ọzọ dịka eserese nke olu nke tweets na mpaghara vs. ụwa, ihe isiokwu ahụ yikarịrị, ihe oyiyi, njikọ, na tweets ndị kachasị ọhụrụ. Nwekwara ike ịhụ ebe ọzọ isiokwu a na-ewu ewu site na ịpị isiokwu ahụ n'ime ngosipụta zuru ezu, ma ọ bụ ihe ọzọ ndị mmadụ na-ekwu banyere ebe a site na ịpị aha ebe ahụ.
Geochirp - GeoChirp na enyere gi aka ichota ndi mmadu Twittering maka ihe puru iche na mpaghara.
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọta na edemede a.
Tags: Ogbe24chris mesinaakụkọ kacha mmahashtag facebookchọta hashtagsakpa hashtaggeochirpgoogle nyochagoogle + hashtagebelataHashtag ngwandozi hashtaghashtag nlekotahashtag nyochahashtag nyocha engineHashtag ngwaọrụhashtagify.mehavehtagshashtag pinterestememeonye na-ahụ anyaseesawnanị tụrụmmekoritatagbodumkpadotrendmaptweetreachTwitterHashtag twitternyocha twitternyocha twitterTwubs
Mee ka ọnụnọ Google SERP gị dịkwuo mma site na Snippets Ọgaranya ndị a
Usoro ihe omuma ohuru ohuru na ahia
Jan 30, 2013 na 5: 56 AM
Ka anyị were Facebook, dịka ọmụmaatụ. Igbe ihe o kwuru bụ ezigbo mma maka ya ka eji ya dị ka ọnụ ahịa ndị ahịa. N'aka nke ọzọ, Twitter hashtags na-enye usoro mkpado pụrụ iche maka mkparịta ụka.
Jun 13, 2013 na 12: 32 PM
Daalụ maka gụnyere Tagboard - maa jijiji, na m bịara hụ ọkwa a! Anyị ka na-aga na ike na-emejuputa atumatu a iri na abuo nke atụmatụ ebe ọ bụ na nke a e gwa gụnyere imeru ihe n'ókè, na-ebi ndụ mode, wdg…'snyaahụ si Facebook mara ọkwa bụ ịtụnanya anyị! Ọ bụ ezie na anyị na-adọta #hashtags site na ikpo okwu ha kemgbe Ọktọba, ọkwa a gbara ume iji #hashtags na FB & anyị na-ahụ nnabata dị egwu ma na-anụ ọtụtụ ọdịnaya na-eji #hashtag n'oge awa 12 gara aga.
Jun 22, 2013 na 2:43 AM
Ndepụta dị ukwuu! Daalụ maka biputere a 😉
Ọkt 24, 2013 na 3:01 AM
Ọtụtụ ekele maka gụnyere RiteTag, Douglas, ma ọ bụrụ na anyị nwere ike G + oku vidiyo, ọ ga-amasị m iji atụmatụ gị mee atụmatụ anyị; anyị bu n'obi ịkwaga ịghọ hashtag results-mmụba ụlọ.
Kachasị mma Orlando SEO Company
Nov 14, 2013 na 6:47 AM
Nke a bụ akụkọ dị egwu "Na-enyocha ugboro ole ejiri hashtag na Twitter wee nye nkọwa gbasara hashtag." akwa post…
Onye isi ala / Onye guzobere / Onye ọbịa na Social Network Show
Ọkt 18, 2014 na 8:55 AM
na-adọrọ mmasị ma na-enye aka, daalụ.
Dee 17, 2015 na 9: 21 AM
Enwere m mmasị na blọọgụ gị - Ọ bụ otu n'ime ole na ole m na-agbaso n'ụzọ okpukpe ma enwere otu ihe m na-aghọtaghị, n'ihi na ọ nweghị onye kwuru banyere nke a - ọ bụghị gị, ọ bụghị Buffer.
1. Ọ na-akawanye gị depụtara (n'ihi na nke kpọrọ sloppy akpaaka kasị ukwuu na IFTTT na a "mara m" na-emekarị) -
2. Ọ na-akawanye gị njikọ aka ma naanị n'ihi bots na akpaghị aka retweeting.
Iji nwalee echiche a, m wuru bot nke na-emeghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị retweet Jeff Bullas maka ọnwa 2 (n'ihi na ndị edemede Jeff na-eji hashtags karịa onye ọ bụla m maara) dị ka ndị na-eso ụzọ! Ndi esoghi onye obula emeghi ihe obula mana RT Jeff Bullas na #growthhacking. Echegbula n'iji ndepụta #socialmedia ma ọ bụ #emailmarketing rụọ ndepụta - ị ga-enweta ihe mkpofu
Achọghị m ka edepụtara m n'ihi #SSA ma ọ bụ karịa itinye aka na bot. Yabụ IMHO, hashtags anaghị agbakwunye uru ọ bụla (belụsọ maka mkparịta ụka Twitter na ọgbakọ wdg). Edere m ederede banyere nke a na Ọkara.
Ritetag dị mma mana ọ bụghị n'ihi na ọ na-enye gị hashtags ka mma (n'eziokwu, hahtags ha anaghị edepụta gị). Ritetag dị mma n'ihi na ị na-ahapụ gị itinye foto, memes na gifs n'ime tweets gị na-enweghị isi.
Dec 17, 2015 na 2:14 PM
Debbie - nke ahụ bụ ndụmọdụ dị mma maka ndị na - agụ akwụkwọ anyị. Ma ị ziri ezi - ka anyị na-eji Ritetag, ikike ịtinye eserese dị egwu. M a bit iri na animated gifs!
Dec 17, 2015 na 3:34 PM
Anyị nwere ihe karịrị otu ihe karịa! M na-erikwa gifs kwa. 🙂
Gustavo Woltmann kwuru
Ezigbo ndụmọdụ banyere otu esi agagharị na ebe a.
Sep 6, 2016 na 9: 48 AM
Ọ dịghị isiokwu nnyocha zuru ezu na-enweghị ọchụchọ aro, karịsịa mgbe ọ na-abịa mobile search, ebe ndị mmadụ na-eji ndị na-azọpụta oge. Enweghị m ọnụ ọgụgụ mana m na-echeta na ndị ọrụ mkpanaka pịa aro ọchụchọ ọtụtụ oge karịa na aro ndị ahụ dị iche na ajụjụ gị. Ihe Nlereanya: https://serpstat.com/keywords/questions/?query=bluetooth+speaker&se=g_us
Beverly Lizotte na-bụ mmadu
Sep 15, 2016 na 2: 08 AM
Ihe na-adọrọ mmasị! Achọpụtara m na ọ bara ezigbo uru nye ndị nọ n'ọhịa SEO na Social Media Marketing.
Daalụ nke ukwuu maka nke a. Na-ele anya maka ihe ederede gi sir!
Jan 27, 2021 na 3: 28 AM
Nnukwu ọrụ! Agụọla m ngwaọrụ niile ekwuru. Jide ka iji!
Daalụ maka ịkekọrịta ozi a bara uru. Ka ị na-ekwu maka ngwa nyocha hashtag, enwere otu ngwa ọrụ ọzọ enwere m ike iwebata maka gị.
Aha ya https://www.trackmyhashtag.com/ - ngwa nyocha hashtag. Ọ kachasị mma ịchọta ụdị data hashtag ọ bụla na ezigbo oge site na Twitter wee nyochaa ya iji mepụta stats bara uru.
Obi ga-adị m ụtọ ma ọ bụrụ na i lee anya na ngwa ọrụ a wee nye gị nzaghachi bara uru.
Jenụwarị 31, 2021 na 1:19 PM
M agbakwunyere ngwá ọrụ na emelitere isiokwu a, daalụ!
Feb 23, 2021 n’elekere 2:57 nke abali
Daalụ maka gụnyere Trackmyhashtag. Obi dị m ezigbo ụtọ ịhụ 🙂